प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण सफल – Pahilo Update
By Desk Last updated Mar 4, 2020
भाञ्जी समीक्षा संग्रौलाको शरीरबाट निकालिएको मिर्गौला ओलीको शरीरमा प्रत्यारोपणपछि काम गर्न थालेको डा. अरुण सायमीले बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको शरीरमा मिर्गौला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण भएको छ’, ओलीका निजी चिकित्सक डा. अरुण सायमीले भने, ‘नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालेको छ। प्रधानमन्त्रीले पिशाव पनि फेर्नुभएको छ।’
‘प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्रीले पिशाव पनि गर्नुभएको छ। अब टाँका लगाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘नयाँ मिर्गौलाले काम गर्न थालेपछि पहिलो स्टेपको ‘डेन्जर जोन’ पार भयो। अबको केहीबेरमा प्रत्यारोपणको सबै काम सकिन्छ।’
( हामीले याे समाचार थाहाखवर डटकमबाट साभार गरेका हाैँ । – सम्पादक )